I-china Poly DADMAC abakhiqizi nabaphakeli | Amanzi ahlanzekile
IPoly DADMAC isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni izinhlobo ezahlukahlukene zamabhizinisi ezimboni kanye nokwelashwa kwendle.
Lo mkhiqizo (obizwa ngokuthi yi-Poly dimethyl diallyl ammonium chloride) yi-cationic polymer esefomini noma ifomu eliwuketshezi futhi ingaqedwa ngokuphelele emanzini.
I-PDADMAC ingasetshenziswa kabanzi emanzini amdaka ezimboni kanye nokuhlanzwa kwamanzi ebusweni kanye nokuqina kukadaka nokususa amanzi. Kungathuthukisa ukucaciseleka kwamanzi kumthamo ophansi kakhulu. Inomsebenzi omuhle osheshisa isilinganiso sedimentation. Ifanele uhla olubanzi lwe-pH 4-10.
Lo mkhiqizo ungasetshenziswa futhi emanzini angcolile e-colliery, iphepha elenza amanzi angcolile, inkambu kawoyela kanye nokucwenga uwoyela amanzi amdoti o-oily kanye nokwelashwa kwendle yasemadolobheni.
imboni yokwenza iphepha
Ayinambala noma i-Light-Clolor
Mhlophe noma Khanya
I-Dynamic Viscosity (mpa.s, 20 ℃)
i-pH value (1% isixazululo samanzi)
Okuqukethwe okuqinile% ≥
1. Uma isetshenziswa yodwa, kufanele ihlanjululwe ekugxileni kwe-0.5% -0.05% (ngokusekelwe kokuqukethwe okuqinile).
2. Ekusebenzelaneni namanzi ahlukene emithombo noma amanzi angcolile, isilinganiso sisekelwa ku-turbidity kanye nokuhlungwa kwamanzi. Umthamo okonga kakhulu ususelwa esivivinyweni sembiza.
3. Indawo yokulinganisa nomthamo wokuxuba kufanele unqunywe ngokucophelela ukuqinisekisa ukuthi ikhemikhali lingaxubeka ngokulinganayo namanye amakhemikhali asemanzini futhi ama-flocs awakwazi ukuphulwa.
4. Kungcono ukukhiqiza umkhiqizo ngokuqhubekayo.
Umkhiqizo udinga ukulungiswa emafektri anedivayisi yokulinganisa nokuhanjiswa. Kudingeka i-sirinig elinganiselayo. Izinga lokushisa kwamanzi kufanele lilawulwe phakathi kuka-10-40 ℃. Inani elidingekayo lalo mkhiqizo lincike kwikhwalithi yamanzi noma izici zedaka, noma ezahlulelwa ngokuhlolwa.
Iphakheji: Isigubhu esingu-210kg, 1100kg
Isitoreji: Lo mkhiqizo kufanele uvalwe futhi ugcinwe endaweni eyomile nepholile.
Uma kuvela ukuhlukaniswa ngemuva kokugcinwa kwesikhathi eside, kungaxubeka ngaphambi kokusetshenziswa.
Iphakheji: Isikhwama eselukiweyo esingu-25kg
Isitoreji:Gcina endaweni epholile, eyomile futhi emnyama, izinga lokushisa liphakathi kuka-0-40 ℃. Yisebenzise ngokushesha okukhulu, noma kungathinteka okumanzi.
Langaphambilini Umenzeli Wokuhlobisa Amanzi CW-08